התגלות 18 HHH – Adiyisɛm 18 ASCB | Biblica
התגלות 18 HHH – Adiyisɛm 18 ASCB
1Yei akyi, mehunuu ɔbɔfoɔ foforɔ sɛ ɔfiri ɔsoro reba fam. Na ɔwɔ tumi kɛseɛ na nʼanimuonyam hyerɛn asase so nyinaa. 2Ɔteaam dendeenden sɛ,
“ ‘Wahwe ase! Babilonia kɛseɛ ahwe ase!’
Adane ahonhommɔne tenaberɛ
ne ahonhom efi nyinaa atɛeɛ.
Nnomaa a wɔyɛ efi a wɔkyiri wɔn nyinaa te ne mu.
3Ɔde ne nsã a ɛyɛ nʼadwamammɔ a
ano yɛ den no maa nnipa nyinaa nomeeɛ.
Asase so ahene ne no bɔɔ adwaman,
na asase so adwadifoɔ nam nʼahonya mmorosoɔ so nyaa wɔn ho.”
4Afei, metee nne foforɔ bi a ɛfiri ɔsoro ka sɛ,
“Momfiri, me nkurɔfoɔ,
na moamfa mo ho amfra bɔne a ɔyɛ no mu,
na mo ne no ankyɛre nʼasotweɛ!
5Ɛfiri sɛ, wɔahyehyɛ ne bɔne atoatoa abɛduru soro,
na Onyankopɔn akae nʼawudie no.
6Sɛdeɛ ɔyɛɛ mo no, monyɛ no saa pɛpɛɛpɛ;
deɛ ɔyɛɛ mo biara no, montua ne so ka mprenu.
Nsa a ɔde maa mo no, monhyɛ no deɛ ano yɛ den mmɔho mmienu.
7Momma nʼayayadeɛ ne nʼawerɛhoɔ nnɔɔso
sɛ animuonyam ne ahonya a ɔpɛ maa ne ho no.
Ɛfiri sɛ, daa ɔka sɛ,
‘Mete ha sɛ ɔhemmaa;
na me werɛ renho da!’
8Yei enti, nʼamanehunu a ɛyɛ yadeɛ
awerɛhoɔ ne ɛkɔm bɛba ne so da bi.
Na wɔde ogya ahye no,
ɛfiri sɛ, Awurade Onyankopɔn a ɔbu no atɛn no yɛ kɛseɛ.
9“Sɛ asase so ahene a wɔne no bɔɔ adwaman, dii dɛ no hunu hye a wɔrehye no no wisie a, wɔbɛsu atwa agyaadwoɔ. 10Nʼamanehunu no hu a ɛyɛ enti, wɔbɛgyina akyiri asu sɛ,
“ ‘Due! Due, Ao, kuropɔn kɛseɛ,
Ao Babilonia, kuropɔn a ɛwɔ tumi!
Dɔnhwere baako pɛ mu, wʼatemmuo aba.’
11“Adwadifoɔ a wɔwɔ asase so nso su no ɛfiri sɛ, obiara ntɔ wɔn nneɛma bio. 12Obiara ntɔ sikakɔkɔɔ ne dwetɛ, ne aboɔden aboɔ ne nhweneɛ pa, ne nwera pa ne ntoma afasebire ne serekye ne tam kɔkɔɔ, ne nnua a ɛyɛ hwam nyinaa ne asonse adwinneɛ nyinaa, ne adwinneɛ a wɔde nnua a ɛwɔ din ayɛ, ne ayowaa ne dadeɛ ne abohemaa, 13ne pɛperɛ ne mmorɔngo, ne nnuhwam ne kurobo, ne hwamfufuo ne nsã ne ngo, ne asikyiresiam muhumuhu ne ayuo, ne nyɛmmoa ne nnwan ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne nkoa ne nnipa akra.
14“Adwadifoɔ no bɛka sɛ, ‘Nneɛma pa a wopere hwehwɛeɛ no nyinaa ayera, na wʼahonya ne wʼanimuonyam no kɔ, na wo nsa renka bio.’ 15Adwadifoɔ a wɔnyaa wɔn ho wɔ kuro no mu no bɛgyina akyirikyiri ɛfiri sɛ, wɔsuro amanehunu a ɔrehunu no. Wɔbɛsu na wɔatwa agyaadwoɔ, 16na wɔaka sɛ:
“ ‘Due! Due, Ao, kuropɔn kɛseɛ a
ɔfira nwera pa ne ntoma afasebire ne tam kɔkɔɔ,
na sika ne aboɔden aboɔ ne nhwene pa bobɔ mu.
17Dɔnhwere pɛ, na saa ahonya dodoɔ yi asɛe.’
“Ahyɛnkafoɔ panin ne ɛhyɛn no mu nnipa, ne ɛhyɛn no mu adwumayɛfoɔ, ne wɔn a wɔka ho a wɔnya wɔn anoduane firi ɛhyɛn adwumayɛ mu no nyinaa gyinaa akyirikyiri. 18Wɔsuiɛ wɔ ɛberɛ a wɔhunuu ogya a ɛrehyeɛ no wisie no, wɔteam ka sɛ ‘Kuropɔn biara a ne kɛseɛ te sɛi mmaa da.’ ” 19Wɔtoo mfuturo guu wɔn atifi na wɔsu twaa agyaadwoɔ sɛ,
“ ‘Due! Due Ao kuropɔn kɛseɛ,
wo a wɔn a wɔwɔ ahyɛn wɔ wo mu no
nam wʼahonya so yɛɛ adefoɔ.
Na dɔnhwereɛ baako pɛ mu, wɔahwere biribiara!’
20“Ma wʼani nnye ne ho. Ao, ɔsoro!
Ahotefoɔ ne asomafoɔ ne
adiyifoɔ mo ani nnye!
Ɛkwan a ɔde mo faa so enti,
Onyankopɔn abu no atɛn.”
21Afei, ɔbɔfoɔ hoɔdenfoɔ bi faa ɛboɔ a ne kɛseɛ bɛyɛ sɛ owiyammoɔ to twenee ɛpo mu kaa sɛ,
“Saa ahoɔden yi ara
na wɔde bɛto Babilonia kɛseɛ no atwene,
a wɔrenhunu no bio.
22Wɔrente sankubɔfoɔ ne nnwomtofoɔ, atɛntɛbɛnbɔfoɔ ne totorobɛntohyɛnfoɔ nka bio wɔ mo mu.
Wɔrenhunu odwumfoɔ biara wɔ wo mu bio.
Na wɔrente owiyamfoɔ biara nka wɔ wo mu bio.
renhyerɛn wɔ wo mu bio.
Wɔrente ayeforɔkunu ne ayeforɔyere
nne wɔ wo mu bio.
Wʼadwadifoɔ yɛ ewiase mu nnipa titire.
Na wɔde wo ntafowayie adaadaa aman nyinaa.
24Wɔ ne mu na wɔhunuu adiyifoɔ ne ahotefoɔ
ne wɔn a wɔkumm wɔn asase so nyinaa mogya.”
ASCB : Adiyisɛm 18